Oovimba beTrx - Iphepha lesi-2 kwelesi-3
UTron ubhengeza ubuDlelwane boBuchule kunye noMenzi weDAO
Ukuhlaziywa: 23 April 2021
I-Tron I-blockchain kunye ne-DAO Maker (DAO) incubator yenkxaso-mali yeprojekthi ibhengeze ukuba bazakudibana ukuvumela iinkonzo ze-DAO ukuba zifikeleleke ngaphandle komthungo kwinethiwekhi yeTron.
Ubambiswano luya kunceda iiprojekthi ezisekwe kwi-Tron ukuba zisebenzise isiseko esikhulu se-DAO sonyuso mali. Ngaphandle kwamathuba okunyusa ingxowa-mali, i-DAO inceda iiprojekthi ze-blockchain ziqokelele uluntu olomeleleyo noluzinikeleyo njengezinto ezingenakuphepheka kwinkqubela phambili ezinzileyo. Olu phawu lufezekiswa nge "Imigodi yezentlalo" izixhobo.
Oko kwathethi, ukuphinda uhlangane nabaphulaphuli abazizigidi ngezigidi zeTron kukugxila kuphuhliso loMenzi we-DAO, ngakumbi kwicandelo lezicelo ezabelweyo ngokusemthethweni (iDeFi).
Okwangoku, i-DAO ngumntu ophambili kwi- "Umnikelo wokubamba umtya" (SHO) ingcinga. Uthungelwano lubeka phambili uhlalutyo lwetyathanga, idatha yomsebenzi womsebenzisi, kunye nezinye iiparameter ezibalulekileyo zokuchonga oyena mntu ufaka isicelo seprojekthi.
Umtya wokubamba iintambo unoxanduva lokwabiwa kweethokheni ezininzi ezivaliweyo. Eli nqaku linceda iprojekthi ukuba ikhethe abaphulaphuli abafanelekileyo ukulungiselela umnikelo wethokheni.
UJustin Sun, umseki weTron, uncome indibaniselwano entsha, esithi:
"Siyavuya ukuba sisebenzisana nenkokheli yeshishini efana ne-DAO Maker ukuzisa i-cross-chain community incubation kunye ne-fundraising kwi-TRON."
Amanqanaba aphambili e-TRX ukuba abukele-Epreli 23
Ngokudibana nayo yonke intengiso yemali ye-cryptocurrency, uTron urekhode ukwehla okukhulu kwiiyure ezingama-24 ezidlulileyo kwisibhengezo esivela kuMongameli wase-US. Ukwehla kuthumele i-cryptocurrency kwindawo yayo ephantsi malunga neeveki ezintathu (i-0.0899 yeedola), ikhupha i-50% ye-whopping ukusukela oko yaqala ngexesha elitsha.
I-TRX ithumele umkhondo omncinci osuka kwingozi kwaye ubuye umva ngaphezulu kwe- $ 0.1 yendawo, njengoko iibhere ziphulukana nokubamba kwazo. Kwakhona, imali yamashumi amabini ngobukhulu yedijithali ibonakala ibuyela kwimeko egqithisileyo, ebonisa ukuba ukubuyela kwimeko yesiqhelo kuyaqhubeka.
Okwangoku, amanqanaba ethu oxhathiso ayi- $ 0.1050, i- $ 0.1100, kunye ne- $ 0.1150, kwaye amanqanaba enkxaso ayi- $ 0.0950, $ 0.0900, kunye ne- $ 0.0850.
Imali iyonke yentengiso: $ 1.81 zezigidi
Imali eyintloko yentengiso yeTRON: $ 7.2 billion
Tron Dominance: 0.39%
I-TRON iba nguMkhuphi omkhulu we-USDT, ithatha i-Ethereum
Ukuhlaziywa: 17 April 2021
Emva kweminyaka emibini ukusukela oko yahlanganisa iTether (USDT) kwi-blockchain yayo, I-TRON (TRX) isuse isigxina esibalulekileyo ngokugqitha i-Ethereum njengenethiwekhi enexabiso elininzi le-USDT. Ngexesha lokushicilela, ngaphezulu kwesiqingatha sayo yonke i-USDT ijikeleza kwinethiwekhi ye-TRON.
Kwi-2019, i-TRON kunye ne-Tether, inkampani ebamba umboneleli omkhulu we-solidcoin, batyikitye ubambiswano ukonyusa ukwamkelwa kwe-USDT. Ukudityaniswa kwe-TRON kuncede i-USDT ukuba ifezekise ukwahluka okubalulekileyo, kuthathelwa ingqalelo uthungelwano lwayo lokuqala lokubamba yayiyi-Ethereum (iithokheni ezisekwe kwi-ERC20).
Ingxelo entsha evela kwiphepha lewebhu likaTether elityhilekileyo laveza ukuba iyonke i-USDT egunyazisiweyo kwi-Ethereum ikwi- $ 23.4 yezigidigidi, ngelixa i-USDT epheleleyo kwi-TRON idlulile kwi-24 yezigidigidi zeedola.
Ngama-47 eebhiliyoni zeedola ezixabisa i-USDT ejikelezayo (nge-1 USDT ikhonkxiwe ukuya kwi- $ 1), iiakhawunti ezisekwe kwi-USDT esekwe kwi-TRC20 ye-51% yazo zonke ezijikeleza iTether.
Iingxelo zibanga ukuba ukutshintshwa kwe-Ethereum yi-TRON kubangelwe yimirhumo yegesi eninzi kwinethiwekhi ye-Ethereum, ekhuthaze abathengisi ukuba bafune ezinye iindlela ezingabizi kakhulu kwintengiselwano ye-USDT.
Ukubhukuqwa kwe-TRON yayiyinkqubo engagungqiyo, eyenzeka kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo.
Amanqanaba aphambili e-TRX ukuba abukele-Epreli 16
I-TRX ithengise ngokunyuka okuzinzileyo ngo-Epreli ngokunyuka okunyukayo. I-cryptocurrency yeshumi elinesibhozo ngobukhulu ikhuphuke nge-0.1693 yeedola izolo, kulandela i-rally ye-30% ukusukela phakathi ku-Lwesithathu.
Oko kwathethi, i-TRON ibonakala ikwimo yokulungisa ngalo mzuzu, njengoko silindele ukubona isaphulelo esifanelekileyo senkxaso ye- $ 0.1495 kwiiyure ezizayo. Nangona kunjalo, ukulungiswa okuthe kratya kufuneka kuxhaswe ngokwaneleyo ngenkxaso yengqondo eyi- $ 0.14000.
Okwangoku, amanqanaba ethu oxhathiso ayi- $ 0.1693, i- $ 0.1800, kunye ne- $ 0.1900, kwaye amanqanaba enkxaso ayi- $ 0.1495, $ 0.1400, kunye ne- $ 0.1300.
Imali eyintloko yentengiso yeTRON: $ 10.9 billion
tags Cryptocurrency, iindaba, TRON, TRX, USDT
Uhlalutyo lwamaxabiso eTron-Epreli 9
I-Tron Uthumele ngaphezulu kwe-140% kwinzuzo kwiiveki ezimbini ezidlulileyo kwaye usabonisa amathemba asempilweni okongezelelekileyo kwithuba elizayo. Ngokwengxelo ezithile, nazi ezinye zezinto ezibalulekileyo ezisekela ithemba lokufumana ngakumbi kwi-cryptocurrency yeshumi elinesithandathu ngobukhulu.
Okokuqala, inethiwekhi yeTron isungula istcoinx entsha namhlanje. I-solidcoin entsha, ebizwa ngokuba yi-True USD (TUSD), iya kuxhaswa yi-USD kwaye ifumaneke njenge "Uzinzo lokuqala olulawulwayo luxhaswa ngokupheleleyo yiDola yaseMelika."
Oku kuphehlelelwa kunokuchaphazela isenzo sexabiso se-TRX kwiiyure ezizayo kunye neentsuku, njengoko zoba umfanekiso olungileyo wokusebenziseka kukaTron.
Okwesibini, iTron kutsha nje inike ingxelo yokuba intengiselwano yayo yemihla ngemihla ikhule ngaphezulu kwe-300% kwezi nyanga zintathu zidlulileyo, oko kuthetha ukuba ngaphezulu kwe-3 yezigidi zentengiselwano ziyaqhutywa kwiTronscan. Ezo manani zentengiselwano ziphezulu kunaleyo yeedigital cryptocurrency ezinjengeBitcoin kunye ne-Ethereum, eqaqambisa ngakumbi ukusetyenziswa kweTron.
Into yokugqibela kukunyuka okuthe chu kwamaxabiso egesi e-ETH, athe abangela ukuba abathengisi abaninzi bafune ezinye iindlela ezinje nge-TRX. Okwangoku, intengiselwano enye ye-ETH ixabisa nantoni na phakathi kwe- $ 12 ukuya kwi- $ 20, ebiza kakhulu kubarhwebi abaninzi.
Intengiselwano kwi-TRC20 iphantsi njenge- $ 1, iyenza ukuba ibe yinto enomdla kakhulu kubaphuhlisi bemali kunye nabarhwebi.
Amanqanaba aphambili e-TRX ukuba abukele-Epreli 9
UTron wafumana ulungiso olukhulu ukusuka kwirali yakhe yamva nje ukuya kwixesha lonke elitsha eliyi- $ 0.1495 kwiintsuku ezithile ezidlulileyo kwaye wawa phantsi kwendawo yenkxaso ye- $ 1.050. I-cryptocurrency yeshumi elinesithandathu ngobukhulu ikwazile ukuququzelela isaphulelo esivela kule ndawo iphantsi kwaye yenyuka yaya kwindawo eyi- $ 1.2500.
Nangona kunjalo, ukunyuka ukuya ku-1.2500 yokuxhathisa kulandelwe kukuhamba komgaqo osecaleni, okubangele intshukumo encinci ye-bearish. Oko kwathiwa, i-TRX ngoku ithengisa ngokuhla komgaqo wokuhla usiya kwiveki yayo esezantsi. UTron kufuneka athumele ikhefu elicocekileyo ngaphezulu komgca wendlela kunye nokumelana ne- $ 1.2000 yokufumana nayiphi na into yokubambisa.
Okwangoku, amanqanaba ethu okuchasana akwi- $ 0.0900, $ 0.0987, kunye ne- $ 0.1000, kwaye amanqanaba enkxaso akwi- $ 0.0823, $ 0.0782, nakwi- $ 0.0750.
Imali eyintloko yentengiso yeTRON: $ 8.5 billion
I-TRON ibamba iiKhasino eziseBlockchain esekwe kwiXabiso
I-Playza, ikhasino esekwe kwi-blockchain, ibhengeze ngo-Epreli 1 ukuba isungule iqonga layo kwi I-TRON (TRX) inethiwekhi. Inkampani iqaphele kupapasho lwayo izolo ukuba esi sisiganeko esibalulekileyo kuyo.
I-Playza iqinisekisa ukuba inika iqonga lokudlala elikwi-intanethi elilungileyo nelicacileyo labasebenzisi be-cryptocurrency kwamanye amazwe kwihlabathi liphela. Inika uluhlu olubanzi lwamava emidlalo yekhasino ngaphandle kokuyalela abasebenzisi ukuba bagcwalise ukubhalisa, ukurhoxisa kunye nokufaka iifom.
Inkampani esekwe kwi-blockchain iqaphele ukuba izakuxhasa kuphela i-TRON kunye ne-TRX tokens ye-deposits okwangoku kwaye iya kubonelela ngenkxaso yezinye ii-asethi ze-crypto, kubandakanya i-EOS kunye ne-ETH kwezi nyanga zizayo. Abasebenzisi banokudlala imidlalo emininzi kwi-Playza nge-TRONLink, esona sikhwama sikhethiweyo kubasebenzisi be-TRON. Abasebenzisi banokwenza iidiphozithi kwangoko kunye nokurhoxiswa kwemali ngexabiso eliphantsi.
I-TRON iye yacotha ngokukhawuleza igama elithi "Las Vegas kwi-blockchain" ngenxa yeengcakazo ezininzi kunye nokudlala i-dApp eyayibamba kwiqonga layo.
Oko kwathethi, iqela lePlayza liqinisekisile ukuba bazimisele ukusebenzisa i-TRON ecosystem kunye nemidlalo eyabelweyo ngokupheleleyo ekuboneleleni ngamava okudlala aphezulu kubasebenzisi bayo.
Amanqanaba aphambili e-TRX ukuba abukele-Epreli 2
I-TRON ishenxisile isithintelo esidlulileyo se- $ 0.0680 kwaye inyuke ngaphezulu kwe-40% ukusukela ngoko. I-cryptocurrency yamashumi amabini ngobukhulu ifikelele kwinqanaba le-0.0987 yeedola kwiiyure ezingama-48 ezidlulileyo ngaphambi kokulungiswa kwenkxaso ye- $ 0.0823.
Oko kwathethi, i-cryptocurrency iphinde yaqala ngohambo lwayo lwe-bullish ukuya kwinqanaba le-0.1 yeedola kodwa kufuneka icime ukumelana ne- $ 0.9 kuqala. Ngokunikwa kwitoni ekhoyo ngoku kwimarike ebanzi, i-TRX inokulinganisa ukumelana kungekudala.
Nangona kunjalo, i-TRON ibonakala ngathi ikwimimandla ethengwe kakhulu ngalo mzuzu, kwaye ukulungiswa okubukhali kwi-0.0750 yeedola kunokulandela. Oko kwathiwa, abathengisi kufuneka bathengise le asethi ye-crypto ngononophelo kwiiyure ezingama-24 ezizayo.
Imali iyonke yentengiso: $ 1.93 zezigidi
Imali eyintloko yentengiso yeTRON: $ 6.3 billion
Amaqabane e-TON neMixMarvel yokuzisa amanqaku asekwe kwi-NFT kwi-ecosystem yayo
I-TRON (TRX) Kutshanje kubhengezwe ukuba utyikitye isivumelwano sentsebenziswano kunye neqonga lokushicilela lomdlalo we-blockchain, iMixMarvel, ukubandakanya iimpawu ezingafakwanga ithokheni esekwe kwindalo ye-DeF ye-Deon Ngokwaziswa, obu budlelwane buya kubandakanya ukudityaniswa kweWallet SDK kwinkqubo ye-TRON.
IMixMarvel inyuka kancinci isiya kumzi mveliso weethokheni ezingabonakaliyo (NFT) kunye nemveliso nganye entsha okanye inqaku lokuqaliswa kwayo. Ubambiswano luya kuvumela i-TRON ukuba ibonelele ngamava e-FTs kunye neeNFTs, ngenxa yomgaqo odityanisiweyo werocket.
IProtokholi yeRocket yitekhnoloji ephambili yeMixMarvel kwaye kutshanje ibone ukuphuculwa kwezinye zeempawu zayo, kubandakanya ukwanda, ukufikelela ngaphandle kwemvume, kunye namandla apheleleyo eTuring.
Oko kwathethi, iprotocol ephuculweyo ngoku iyahambelana ngokupheleleyo ne-TCR-721, TRC20, isivumelwano se-smart, kunye ne-EVM ye-TRON.
Ubambiswano lwamva nje lwe-TRON bubungqina bokuzinikela kwakhe ekuthatheni inxaxheba kumzi mveliso we-NFT, ngakumbi kwicandelo le-blockchain lokudlala.
Umphathi omkhulu we-TRON, uJustin Sun, uvakalise ukonwaba kwakhe ngentsebenziswano noMixMarvel ukukhupha iqonga elipheleleyo le-NFT.
"Siyavuya ukuba sisebenzisana neMixMarvel ukuzisa indawo yentengiso ye-NFT kunye nesipaji kwi-TRON ecosystem."
Amanqanaba aphambili e-TRX ukuba abukele-Matshi 26
I-TRON iphinde yafumana amandla ayo ashukumisayo ukusuka ekuhleni kwayo kwe-15% ukuya kuthi ga kwindawo eyi-0.0520, njengoko i-cryptocurrency iqhubeka nokuthengisa ngaphakathi kwejelo le-bearish. Oko kwathethi, i-TRX okwangoku isesiphelweni seli jelo kwaye kufuneka inyuse eli nqanaba ukuze iqhubeke inyukele phezulu. Ukusilela ukophula ngaphezulu kweli jelo kunokubangela ukuhla kwinqanaba le- $ 0.0485 kwiintsuku ezizayo.
Nangona kunjalo, iiyure zethu ze-4 ze-MACD zibonisa ukuba i-cryptocurrency engamashumi amabini anesibini ngobukhulu isiza kuphuma ngaphandle kweemeko ezigqithileyo, isenza ukuba kube lula ukophuka ngaphezulu komjelo.
Okwangoku, amanqanaba ethu okuchasana akwi- $ 0.0546, $ 0.0556, kunye ne- $ 0.0600, kwaye amanqanaba enkxaso akwi- $ 0.0482, $ 0.0461, nakwi- $ 0.0412.
Imali eyintloko yentengiso yeTRON: $ 4.6 billion
I-TRON (TRX) idibanisa phakathi kwe- $ 0.045 kunye ne-0.055 yeedola, iiNdawo zoMbane oPhezulu oPhezulu
Ukuhlaziywa: 18 Matshi 2021
Amanqanaba aphikisayo aphambili: $ 0.065, $ 0.070, $ 0.075
Amanqanaba enkxaso aphambili: $ 0.045, $ 0.040, $ 0.035
I-TRX / i-USD yexesha elide: Ukuma
Ixabiso le-TRON lilungisa ngaphezulu emva kokonakala ngoFebruwari 23. Ukunyuka okuphezulu kujongene nokumelana ne- $ 0.055. Ukuba amaxabiso ayaphula ukuxhathisa okwangoku, i-altcoin iya kuphakama ukuze iphinde ibuye ngaphezulu kwe- $ 0.065 ephezulu. Kwelinye, ukuba i-crypto ijongene nokwaliwa, ingqekembe inokuthi iphinde iqhubeke nentshukumo ebopha uluhlu phakathi kwe- $ 0.045 kunye ne- $ 0.055.
I-TRX / i-USD-Itshathi yemihla ngemihla
Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zijike phezulu zibonisa uptrend. I-crypto ikwinqanaba lama-58 le-Index ye-Relative Strength Index 14. Ibonisa ukuba ingqekembe inegumbi lokuhlangana phezulu. Ukunyuka kuya kuqhubeka kwakhona ukuba ixabiso liphula umgca wokumelana nomjelo othe tye.
I-TRX / i-USD phakathi kwexesha eliphakathi: Ukuphelisa
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-TRON ikwi-uptrend. Ngomhla we-17 kuMatshi phezulu; ikhandlela elibuyise umzimba laphinda lavavanya ukuphindiselwa kwe-Fibonacci eyi-61.8%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-TRON inokuthi inyuke iye kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci okanye i-0.060 ephezulu yeedola.
I-TRX / i-USD-4 Itshathi yeYure
I-TRON ingaphantsi kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba ingqekembe ikwi-bearish umfutho. Iibhanti ze-stochastic zihamba ngokuthe tye zibonisa ukuba ingqekembe ihamba ecaleni. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zijike phezulu zibonisa uptrend
I-TRON ibisendleleni ephezulu ngasekupheleni kukaJanuwari. Iinkunzi zenkomo zizama ukwaphula ukungavisisani nge-0.055 yeedola eya kuthi ixhase ingqekembe ukuba iphinde iqhubeke kwakhona. Ngokwesixhobo seFibonacci, i-TRON inokuthi inyuke iye kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci okanye i-0.060 yeedola ephezulu.
tags Uhlalutyo lwamaxabiso, TRON, TRX, I-TRX / i-USD
I-Oron esekwe kwiTron Ekugqibeleni isungula iMainnet
I-Bridge Oracle, isigcawu sikawonke-wonke esisekwe kwi-TRON, ibhengeze izolo ukuba iphehlelele i-mainnet. Le projekthi, echazwe njengeprojekthi yokuqala ye-oracle yoluntu kwi-blockchain ye-TRON, iya kwenza ukuba abasebenzisi be-blockchain basebenzise i-DApp yangempela kwi-TRON.
Isithethi esivela kwiBridge Oracle saqaphela ukuba "Ukumiliselwa kwe-mainnet kuyakuvumela ukuba usebenzise ii-Dapps zelizwe lokwenyani usebenzisa iBridge Oracle kwinethiwekhi yeTron," ukongeza oko “Lixesha lokuba uqalise ukulungiselela ngokwenza ii-DApp zakho kwi-Shasta naseNayile yovavanyo lomnatha. Kungekudala siza kuza nohlaziyo oluninzi. ”
Iikhontrakthi ze-Smart zisebenza njengomqolo wezona ndawo zininzi ze-blockchains, njengoko zinceda ukwenziwa kwe-DApp, ii-DAOs, kunye nezinye izinto eziyimfuneko zebhloko. Nangona kunjalo, uninzi lwezi khontrakthi zilumkileyo, ngokwazo, alunxibelelani nedatha ye-off-chain, kulapho kungena khona ii-oracle.
Ii-Oracle ngokukhawuleza ziba yinto ebalulekileyo kuyo nayiphi na i-ecosystem ecosystem. Ukunyuka kwendima yeChainlink kwishishini lokwabiwa kwemali (DeFi) bubungqina bayo le nto kwaye kugxininisa isidingo soqhagamshelo lweebhloko ze-blockchains kwidatha yokwenyani yelizwe.
Ngelixa abaphuhlisi be-Ethereum bekhawulezile ukusombulula umba we-oracle ngokunyuka kweChainlink, iTron Blockchain ibisokola ngemicimbi yokunxibelelana kwedatha ngenxa yokungafumaneki kwe-oracle. Oko kwathiwa, iBhulorho Oracle ijolise ekunikezeleni ngeqonga lomthombo ovulekileyo lokusombulula le ngxaki ngokusungulwa kwe-mainnet yayo.
Ingxelo yezolo ichaze ukuba i-oracle iya kubonelela ngokufikelela kwihlabathi lokwenyani kwiTron nge "Iindlela ezahlukeneyo ze-API, kunye nabancedisi bokucacisa, njengeXML, JSON, kunye ne-HTML."
Amanqanaba aphambili e-TRX ukuba abukele-Matshi 12
Njengokuba sivelile kuhlalutyo lwangaphambili, I-Tron iwile kuluhlu lokudityaniswa emva kokusilela ukucoca inqanaba le- $ 0.0514. I-TRX ibithengisa phakathi kwe- $ 0.0546 kunye ne-0.0482 yeedola kwezi ntsuku zimbalwa zidlulileyo, njengoko umthamo wentengiso kunye nokungazinzi kuyikhaba i-TRX.
Oko bekuthethile, amandla asemacaleni akhoyo anokuqhubeka kwiintsuku ezizayo ngaphandle kokuba iinkunzi zeTron zithathe inyathelo kukhululo lohlahlo-lwabiwo mali lwaseMelika kamva namhlanje.
Imali iyonke yentengiso: $ 1.71 zezigidi
Ukuthengiswa kwemali kwiTron: $ 3.6 billion
Amaqela eBhulorho yeOracle ePhakamileyo ngeTRON yokuSungula iMainnet
I-Bridge Oracle ibhengeze ukuba izokwazisa ngeenkonzo kwi-mainnet yayo eya kwenza ukuba abasebenzisi basebenzise usetyenziso lwehlabathi lokwenyani (dApps) kwinethiwekhi ye-TRON.
Ukukhutshwa kwe-mainnet kuhlala kungumzuzu onomdla kwiiprojekthi ze-blockchain, kuba oko kuthetha ukuba ibhlokhi ivuleleke ngokusemthethweni kuluntu ngokubanzi, ekhuthaza ukwamkelwa kwabantu abaninzi kunye nokusetyenziswa. Ukuphehlelelwa kweenkonzo eziphambili ze-blockchain yandisa imveliso yayo esemthethweni kwintengiso, ibenza ukuba babekho ukuze basebenze ngexesha langempela kunye nemveliso.
Isithethi seBridge Oracle sathi: “Ngumzuzu onomdla kuthi ukwazisa ngokusungulwa kweenkonzo zethu ezizayo kwi-mainnet. Siwulindile lo mzuzu ixesha elide, kwaye ukuwubona ekugqibeleni utyhila uziva ukhetheke kakhulu. Ukuqaliswa kwethu kwe-mainnet ezayo kuyakuvumela ukuba usebenzise ii-Dapps zangempela-zelizwe ezixhumeneyo usebenzisa iBridge Oracle kwinethiwekhi ye-TRON. Lixesha lokuba uqale ulungiselele ngokwenza ii-DApp zakho kwii-testasta zeShasta kunye neNayile. Kungekudala siza kuza nohlaziyo oluninzi. ”
Isithethi songeze ukuba i-quotient kawonkewonke yeBridge Oracle, eya kuthi ibonelele ngamathuba angcono kumashishini amancinci okuzidibanisa kwi-TRON blockchain.
Amanqanaba aphambili e-TRX ukuba abukele-Matshi 5
Ngaphandle kokuhla okuphawulekayo kwimakethi ye-cryptocurrency, I-TRON (TRX) Kubonakala ngathi kugcinwa umfutho we-bullish. I-cryptocurrency engamashumi amabini anesibini ngobukhulu ngoku ithengisa ngaphakathi kwejelo enyukayo, nangona iqala ukuthoba isantya phakathi kokuthengisa okuncinci. I-TRON kufuneka igqithe ngaphezulu koxinzelelo lwe- $ 0.0514 ngaphambi kokuba iinkunzi zeenkomo ziphinde zenziwe amandla okanye umngcipheko wokuwela kudityaniso.
Oko kwathethileyo, nakuphi na ukuhamba kwe-bearish kweli nqanaba kuya kuyaliwa yidola eyi-0.0480 (indawo esisiseko yejelo lethu).
Okwangoku, amanqanaba ethu aphikisayo akwi- $ 0.0514, $ 0.0556, kunye ne- $ 0.0600. Ngelixa amanqanaba ethu enkxaso aphambili ayi- $ 0.0461, $ 0.0412, kunye ne- $ 0.0350.
Imali iyonke yentengiso: $ 1.44 zezigidi
Ukuthengiswa kwemali kwiTron: $ 3.5 billion
Ukulawulwa kweTron: 0.24%
Amaqabane e-TRON kunye ne-Prosper Bolster Liquidity kwiShishini lokuSombulula isisombululo
I-TRON ibhengeze ukuba izakudibanisa intengiso ye-DLT-agnostic, Prosper, kwindalo yayo. Abasebenzisi be-TRON kunye TRX Abanini baya kuba nakho ukubonelela ngemali kwaye baphucule izinga lokuphumelela kweprojekthi yesisombululo soqikelelo.
Umsunguli we-TRON, u-Justin Sun, waziqhekeza iindaba malunga nobambiswano olutsha kukhuphelo kumaphephandaba kwangoko namhlanje. Uye waphawula ukuba ezi projekthi zimbini ze-blockchain ziyahlangana ukusombulula ezinye iingxaki ezigxininiswe kwicandelo lokwabiwa kwamandla.
Ukuphucula iCandelo leSisombululo soQikelelo
Nangona izixhobo zokusombulula iingxaki kwicandelo bezisebenza okwexeshana, ingxelo yeLanga iqaqambisa ukuba umba wokungabikho kwemali eyaneleyo ibingumqobo kwindlela yokwamkelwa kwabantu abaninzi kwicandelo lokuxela kwangaphambili. Ukungabikho kobutyebi kwenzeka ngenxa yentengiso nganye yokuxela kwangaphambili “Ngokwesiko lahlulwe langamatyathanga elinye,” ngaloo ndlela kuthintelwa inani labasebenzisi eliyimfuneko ukubonelela ngemali efanelekileyo yokuqikelela ngokuchanekileyo.
Le yindlela esebenza ngayo impumelelo: ikhuthaza ubutyebi obuphezulu ngokubandakanya abasebenzisi abaninzi, oko kuthetha okungakumbi Kuqikelelwe, kukhokelela kwisiphumo esichanekileyo nesichanekileyo sokuqikelela ngokusekwe kubungqina obuhlangeneyo kwesihlwele.
Ngapha koko, Prosper ineqonga elinqamlezileyo elivumela ukuba idibanise ukubekwa kwemali kwiqonga layo nokuba ithini na indawo yokufikelela yomsebenzisi.
Oko kwathiwa, ngokusetyenziswa kwe-TRX, imali engamashumi amabini anesihlanu kwi-cryptocurrency esekwe kwintengiso yentengiso, i-TRON kunye neProsper balindele ukwanda okukhulu kwichibi labasebenzisi. Okwangoku, ukudityaniswa kuya kunceda abasebenzisi ukuba bafumane ukufikelela kwizicelo ezitsha ezinokuthi zichaphazele ngokuqinisekileyo iindlela zabo zotyalo-mali kunye nemivuzo enokubakho.
Isiteyitimenti sikwakhankanye ukuba uProsper useke i-inshurensi yasimahla equka imali yexesha likaxakeka yokubuyisela imali ebiwe kwiqonga okanye ezinye izinto ezingalindelekanga.
Ngokuka-co-founder wase Prosper, u-Iva Wisher, "Olu bambiswano ne-TRON lulwandiso lweenzame zika-Prosper zokusebenzisana nabadlali abakhulu behlabathi le-DeFi."
Okwangoku, ukukhutshwa kweendaba kukwaqaqambise ukuba i-TRON okwangoku "Sisebenzela ukwenza i-DeFi ecosystem ekhuphisanayo ekhuphisana noogxa bayo ngelixa ivumela ukuthengiselana okungabizi kakhulu, ukudala imeko yokuphumelela kubasebenzisi beqonga."
tags Cryptocurrency, INKQUBELA, TRON, TRX